तथ्यांकोवाच : विश्वमा जडीबुटीको आयात रू. १९७ अर्ब
काठमाडौं (अस) । आईटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा १ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर (रू. १९७ अर्ब) बराबरको जडीबुटी आयात भएको छ । यसमध्ये उत्तरी छिमेकी देश चीनले मात्रै १९ करोड अमेरिकी डलर (रू. २१ अर्ब ६४ करोड) बराबरको आयात गरेको छ । नेपालको जलवायुमा सबै खालका जडीबुटी उत्पादन भइरहेको...
तथ्यांकोवाच : विश्वमा ९ अर्ब डलरको कटफ्लावर आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालको भूगोल र जलवायु पुष्प उत्पादनका लागि अति उपयुक्त क्षेत्र हो । उष्ण जलवायुदेखि ध्रुवीय जलवायुसम्ममा पाइने प्रजातिका पुष्प नेपालमा उत्पादन हुन्छ । सन् २०१८ मा विश्वमा ८ दशमलव ८८ अर्ब डलर बराबरको कटफ्लावर आयात भएको आईटीसीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । छिमेकी देश चीनमै करीब ६५ करोड डलर...
तथ्यांकोवाच : चीनमा रू. २ अर्बको विदेशी आँपको माग
चीनका समृद्ध शहरमा बस्ने उच्च आय भएका वर्गमा विदेशी आँपको माग उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । एलिलेड, क्वाङ्सी र साउथ चाइना कृषि विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको अपानेटडटओआरजी नामक वेबसाइटमा उल्लेख छ । आईटीसी ट्रेडम्यापका अनुसार सन् २०१८ मा चीनमा करीब २ करोड अमेरिकी...
तथ्यांकोवाच : ७ अर्ब डलरको चियाको विश्व बजार
काठमाडौं (अस) । आईटीसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा ७ अर्ब अमेरिकी डलर (रू. ८४० अर्ब) बराबरको चिया आयात भएको छ । पाकिस्तान रू. ६६ अर्बसहित चियाको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता हो । विगत ५ वर्षमा चियाको आयात १ प्रतिशत र विगत २ वर्षमा करीब ३ प्रतिशत बढेको छ । नेपालभित्र उत्पादन वृद्धि तथा गुणस्तर कायम, ढु...
तथ्यांकोवाच : नेपालको कफी २२ देशमा निर्यात
काठमाडौं (अस) । आईटीसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा ३१ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (रू. ३६५३ अर्ब) बराबरको कफी आयात भएको छ । नेपालमा चुरे र महाभारत पर्वत शृंखलाका बीचमा पर्ने पहाडी भागहरू कफीखेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन् । नेपालको कफी विश्वका २२ ओटा देशमा निर्यात हुने गरेको छ । देशभित्र उत्पादन क्...
तथ्यांकोवाच : चीजको विश्व बजार ३२ अर्ब डलरको
काठमाडौं (अस) । सन् २०१८ मा विश्वमा करीब ३२ अर्ब डलर (रू. ३७१७ अर्ब) बराबरको चीज आयात भएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले विश्वको चीज आयातमा १७औं स्थान सहित सन् २०१८ मा रू. ६० अर्ब बराबरको चीज आयात गरेको छ । गत ५ वर्षमा चीज आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत र विगत २ वर्षमा औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहेको...
तथ्यांकोवाच : ३ अर्ब डलरको नक्कली तथा मानव रौंको विश्व आयात बजार
विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट नक्कली तथा मानव रौंको निर्यातमा राम्रो वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालबाट करीब रू. २१ करोड बराबरको नक्कली तथा मानव रौं निर्यात भएको छ । आईटीसीको सन् २०१८ को तथ्यांक अनुसार विश्वमा नक्कली तथा मानव रौंको करीब ३ अर्ब डलर (रू. ३५१...
तथ्यांकोवाच : सारयुक्त तेलको उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारी सहयोगको खाँचो
आईटीसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वमा रू. ६९७ अर्ब बराबरको सारयुक्त तेल आयात भएको छ । विगत ५ वर्षमा सारयुक्त तेलको विश्व आयातमा करीब १० प्रतिशत र विगत २ वर्षमा करीब १२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सारयुक्त तेलको विश्वका अधिकांश प्रमुख आयातकर्ता मुुलुकमा नेपाललाई सहुलियत भन्सारको सुविधा प्राप्त छ । यस अवस...
विकासका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छैन : अर्थमन्त्री खतिवडा
सातामा ९७.१२ अंकले बढ्यो परिसूचक : सात महीनापछि १३०० विन्दुलाई पार
धुलिखेल–बर्दिवास सडक विस्तार गरिने, पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
गुहेश्वरी मर्चेण्टको नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ‘केवल टनेल’ निर्माणको काम शुरु